महोत्तरीका एक युवा २ महिनादेखि क्वारेन्टाइनमै : परीक्षण रिपोर्ट पनि छैन, परिवारको बिजोग ! - Alert Khabar
Homeसमाचारमहोत्तरीका एक युवा २ महिनादेखि क्वारेन्टाइनमै : परीक्षण रिपोर्ट पनि छैन, परिवारको बिजोग !
धनुषा, १० असार । भारतबाट झन्डै १८ दिन क्वारेन्टाइन जीवन बिताएर आफ्नो भूमि नेपाल फर्केका महोत्तरीका जितेन्द्र पासवान अहिले विगत १ महिना २२ दिनदेखि पुनः नेपालकाे क्वारेन्टाइनमै बसिरहन बाध्य छन् ।
महाेत्तरीकाे लोहरट्टी नगरपालिका खुट्टा पिपराढ़ी ४ का पासवान भारतबाट आफ्नो गाउँ फर्किनेबित्तिकै गाउँकै एक क्वारेन्टाइनमा १३ दिन बसे र पुनः पासवानलाई त्यहाँबाट महोत्तरीकै मधेपुरा गाउँको एउटा आधारभूत विद्यालयमा अवस्थित अर्को क्वारेन्टाइनमा लगियो ।
यतिवेला उनी मधेपुराको क्वारेन्टाइनमा पनि विगत २२ दिनदेखि बस्न बाध्य छन् । पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर लगेको समेत हप्ताैँ भइसक्यो तर रिपोर्ट अझै आउन नसकेको स्वयं पासवानले न्यूज़ २४ लाई जानकारी दिएका छन् ।
अति विपन्न परिवारका पासवानको घरमा यतिबेला पत्नी र ३ छोरालाई हेरचाह गर्ने कोही छैन । झन्डै २ महिना बितिसक्दा समेत उनी क्वारेन्टाइनहरूमै बस्न बाध्य बनाइएको गुनासाे गर्छन् । अहिले पासवानको घरमा दैनिक गुजारा गर्न समस्या रहेको सुनाउँदै जितेन्द्रले भने, ‘अब त घरमा पत्नी र छोरालाई खान समेत समस्या भएको छ ।’
गायक बन्ने सपना बोकेर भारत पुगेका पासवानलाई यतिबेला आफ्नै गाउँमा समेत सुनिदिने कोही छैन । न रिपार्टको अत्ताेपत्ताे छ, न त घर जाने ठेगान । अब त यो देशमा गरिबलाई हेरिदिने कोई न भएको भन्दै उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् । पासवानकाे काेराेना रिपोर्ट कस्ले र कहिले ल्याइदिने हाे, उनी प्रतीक्षामै छटपटिएका छन् ।
यता पासवान रहेको क्वारेन्टाइनमा न खाने पानी, न त खानाको नै राम्रो व्यवस्था छ । हाल ११ जना रहेको उक्त विद्यालयकाे क्वारेन्टाइनमा जम्मा २ ओटा शौचालय रहेको छ, त्याे पनि अव्यवस्थित । नुहाउन समेत समस्या हुने गरेको पासवानको गुनासाे छ ।